UN Monitoring Group oo soo bandhigay magacyada dad ay ku tilmaameen qaswadayaal Soomaaliya – idalenews.com
UN Monitoring Group oo soo bandhigay magacyada dad ay ku tilmaameen qaswadayaal Soomaaliya
Guddiga dabagalka xayiraaada hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxaay ku sheegeen in dawlada Eritrea ay taageero siiso kooxo dagaal oogayaal ah oo ay ku tilmaantay inay sabab u yihiin amaan darrada ka jirta dalka Soomaaliya.
Warbixin uu soo saaray Guddiga dabagalka xayiraaada hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea oo lagu qoray wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxaa lagu sheegay in kooxo ay ku tilmaantay inay dagaal oogayaal yihiin ay ka dambeeyaan amaan darida dalka ahaan magaalada Muqdisho waxaana ay guddigu sheegeen inay taageero ka helaan dawlada Eritrea.
Magacyada Guddigan ay sheegeen ayaa waxaa ku jira ninka la yiraahdo Cabdi Nuurre Siyaad Cabdi waal iyo nin kale oo magaciisa lagu sheegay Max’ed Wali Sh. Axmed Nuur oo ay guddigu ku sheegeen in loo yaqaan Ugaas Maxamed Weli.
Cabdi Nuure Siyaad guddiga dabagalka QM waxay ku tilmaameen inuu yahay dagaal ooge magaalada Muqdisho ku nool oo maamula illaa 100 dagaalame oo hubeysan qaatana qandaraasyada dilalka iyo qaarajiinta sida warbixintaan lagu yiri waxaana guddigu sheegay inuu aad ugu dhawyahay oo uu xiriir la leeyahay hogaamiyaha ururka dib u xoreynta ee fadhigiisu yahay magaalada Asmara Zakariye Max’ed Xaaji Cabdi iyo saraakiil Shabaab ka tirsan.
Warbixinta ay guddigu ka diyaariyeen eedeynta Eritrea oo 80 bog ka kooban waxaa lagu wareejiyay shir gudoonka xilligaan ee golaha amaanka ee QM oo ah safiirka dawlada Kuuriyada Koofureed.
“Waxaa lagu ogaaday Illo ay guddigu heleen in Cabdiwaal uu xiriir toos ah la leeyahay madaxda dawlada Eritrea taasna waxaay keentay inuu dhawr jeer uu madax Eritrean ah la qaatay kulamo albaabadu u xirnaayeen kuwasoo lagu qorsheynayey falal amaan daro” ayaa warbixintaan lagu yiri.
Qofka Labaad ee ay guddigan sheegeen oo la yiraahdo Axmed-Nuur waxaa ay ku sheegeen inuu Xarakadda Al-Shabab u qaabilsan yahay dhanka isku xirka siyaasada isla markaana uu Cabdi Nuurre Siyaad Cabdi-Waal uu ku taageero fulinta qorshayaasha.
Axmed Nuur (Ugaas Maxamed-weli) ayaa sidoo kale guddigu sheegeen inuu magaalada Khartoum ee xarunta wadanka Sudan uu kula kulmay safiirka Eritrea u fadhiya dalka Sudan oo Max’ed Mataay la yiraahdo waxaana uu kala hadlay arrimo la xariira in lagu taageero qaska ay Soomaaliya.
Guddigu waxay sheegeen in Safiir Matay uu yahay khabiir ku wanaagsan dhanka sirdoonka ciidamada waxaana uu ka howlgalay Soomaaliya, iyadoo sanadkii 2009-kiina laga musaafuriyay dalka Kenya kadib markii la ogaaday inuu Soomaaliya kula kulmay saraakiil Al-Shabaab ka tirsan
Xukuumadda Asmara ayaa sidoo kale taageerta shaqsiyaad qaswadayaal ah oo qaarkoodna ay dawlada Somalia gaar ahaan madaxtooyada ay ka ag dhaw yihiin sida ku xusan Warbixintaan maanta lagu qoray wakaaladda wararka Reuters ee ay diyaariyeen guddiga Monitoring Group.
Cabdi Nuure Siyaad (Cabdi-waal) oo ka mid ah shaqsiyaadka ku xusan warbixintan ayaa beeniyey waxyaabaha lagu eedeeyey ee ay ka mid yihiin inuu xiriir la leeyahay Erirteya isla markaana ka mid yahay dagaal oogayaal qas ka wada Somalia, isaagoo eedeyntaas ku tilmamay mid been abuur ah.
Ugaas Maxamed-weli oo isna ka mid ah shaqsiyaadka ku xusan warbixintan ayaan weli ka hadlin eedeymaha loo soo jeediyey hase ahaatee mar dhowaan uu la hadlayey warbaahinta gudaha ayuu sheegay inuu taageeradii kala laabtay Al-shabaab isagoo ku eedeeyey iney yihiin koox shareecada diinta Islaamka ka been sheegtay.
Dhageyso: Cabdi waal oo beeniyey inuu ku lug leeyahay liiska dadka qaswadayaasha Somalia ee lagu darey